ukutshintshiselana crypto Korean kuqala ulawulo imizamo self - Blockchain News
ukutshintshiselana ezinkulu cryptocurrency Korea baye kumisa imithetho sandise elubala.
Kwinkomfa cofa e Seoul ngoLwesibini, iinkokeli 14 ukutshintshiselana crypto yasekhaya kuquka Bithumb, Upbit kunye OKCoin ubhengeze imithetho. Bona amalungu Korea Blockchain Association.
Lo umbutho iza kuhlola inkqubo 14 ukutshintshiselana abaqala ezisithoba ukuze ubone ukuba iinkqubo zabo yemithetho. Nangona kunjalo nokuhlolwa singanefuthe encinane kuba imithetho hayi ziyabophelela ngokusemthethweni.
Amalungu afanele ukuba angenise iingxelo self-uhlolo umbutho ngoMeyi 8. Kweyalo, umbutho uya kuqala ukuzihlola amalungu ekuqaleni May 1st.
“Imithetho iimfuneko ezisisiseko ukuqinisekisa transactions crypto ngaphaya,” uthe isikhulu umbutho.
Post Previous:patent ezinxulumene iifayile Amazon crypto emifuleni data
Post Next:Bitcoin ATM inethiwekhi Coinsource isebenza kunye multi-factor umqinisekisi Acuant
UCanzibe 20, 2018 e 5:51 PM